Na-eweta Mmanya Na-aba n'Ala Canada
Ego ole ka ị nwere ike ịbata na Canada n'ejighị ụgwọ ọrụ ma ọ bụ ụtụ isi?
Dị ka ngwongwo ndị ọzọ na-abịa site na omenala, Canada nwere ụfọdụ iwu kpọmkwem gbasara ma hà nwere ike ịṅụ mmanya na-aba n'anya na mba ahụ.
Ndị Canada na-alọghachi, ndị ọbịa na Canada na ndị mmadụ na-aga Canada maka oge dị mkpirikpi ka a na-enyefe obere mmanya na biya n'ime mba ahụ ma ọ bụrụ na ọ na-esonyere ha (ya bụ, ịṅụ mmanya enweghị ike izipụ iche).
Ọ dị mkpa iburu n'uche na onye ọ bụla na-eme ka mmanya na-aba n'anya na Canada aghaghị ịbụ ọ dịkarịa ala oge ịṅụ mmanya na-aba n'anya na mpaghara ebe ha na-abata n'obodo ahụ.
N'ọtụtụ ógbè na ógbè Canada, oge ịṅụbiga mmanya ókè na-achị bụ afọ 19; maka Alberta, Manitoba na Quebec, afọ ịṅụbiga mmanya ókè dị afọ 18.
Ịṅụ mmanya na-aba n'anya ị na-ekwe ka ị bịa na Canada n'ejighị ụgwọ ọrụ ma ọ bụ ụtụ isi ga-adị iche site na mpaghara.
Edere n'okpuru ebe a na-egosi ọnya mmanya nke ụmụ amaala na ndị nleta nwere ike iwetara na Canada n'ejighị ụgwọ ọrụ ma ọ bụ ụtụ isi (otu n'ime ụdị ndị a, ọ bụghị nchikota, na-ekwe ka njem n'otu njem gafee ókèala). A na-ewere ego ndị a dị ka "ịhapụ onwe onye" bụ mmanya na-aba n'anya
Imperial (Bekee) Ọnụ
Mmanya Ruo 1.5 lita Ruo 53 ounces Iko mmanya abụọ
Ihe ọṅụṅụ na-aba n'anya Ruo 1.14 lita Ruo 40 ounces Otu nnukwu karama mmanya
Beer ma ọ bụ Ale Ruo 8.5 lita Ruo 287 mmiri ounces 24 mkpọ ma ọ bụ karama
Isi Iyi: Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ógbè Canada
Ịlaghachi ndị bi Canada na ndị ọbịa
Ihe a dị n'elu ga-emetụta ma ọ bụrụ na ị bụ onye Canada bi ma ọ bụ onye bi nwa oge na-alọghachi site na njem na-abụghị Canada, ma ọ bụ onye Canada mbụ na-alọghachite ibi na Canada.
Ị nwere ike iweta mmanya a dị ukwuu na Canada na-enweghị ụgwọ ọrụ na ụtụ isi mgbe ịchisịrị mba ahụ ruo ihe karịrị awa 48. Ọ bụrụ na ị nọ na njem ụbọchị gaa United States, dịka ọmụmaatụ, mmanya ọ bụla ị na-eweta na Canada ga-edozi ọrụ na ụtụ isi.
A na-enyekwa ndị ọbịa na Canada ohere iweta obere mmanya na Canada na-enweghị ụgwọ ọrụ na ụtụ isi.
Ewezuga na Northwest Territories na Nunavut, ị nwere ike iweta ego karịa ego nkwekọrịta nke onwe gị site n'ịkwụ ụgwọ ọrụ na ụtụ isi n'elu ego, ma ego ndị a na-ejedebe site n'ógbè ma ọ bụ ókèala ị na-abanye n'obodo.
Na-eweta Mmanya Na-aba n'Aka Mgbe M Na-aga Ịnọ na Kanada
Ọ bụrụ na ị na-aga Canada na-adịgide adịgide maka oge mbụ (ya bụ, ọ bụghị onye bi na mbu), maọbụ ọ bụrụ na ị na-abịa Canada ịrụ ọrụ ruo ogologo oge karịa afọ atọ, a na-enye gị ohere iwepụta obere ọnụahịa ndị a kpọtụrụ aha na mbụ. mmanya na-aba n'anya ma nwee ike ịme ndokwa ịṅụ mmiri mmanya (ihe dị n'ime ụlọ mmanya gị dịka ọmụmaatụ) ka ọ bụrụ na ị ga-ede akwụkwọ Canada.
Mgbe ịbanye Canada na ego karịrị ndị edepụtara na eserese dị n'elu (na okwu ndị ọzọ, ego a na-akwụ karịa gị), ọ bụghị nanị na ị ga-akwụ ụtụ na ụtụ isi na ụfe, ị ga-achọ ịkwụ ụgwọ obodo ọ bụla ma ọ bụ ụtụ isi obodo.
Ebe ọ bụ na mpaghara ọ bụla dịgasị iche iche, kpọtụrụ onye na-achịkwa mmanya na-achịkwa mmanya na mpaghara ebe ị ga-abanye Canada maka ozi kachasị ọhụrụ.
Ụlọ ọrụ Embas na Canada na United States
Onyinye ahia ahia nke Ontario (HST)
Ide maka CPP Retirement Pension
Kedu ihe Ụlọ ọrụ Canada mere?
Iwu gbasara ịṅụ sịga Canada na-agụ site na mpaghara na ógbè
Whitehorse, Isi Obodo Yukon
Ụkpụrụ T4E maka Ụtụ Isi nke Canada
Nkwupụta nkọwa na nkọwa nke osmoregulation
Ihe sitere na Martin Van Buren
A History and Style Guide nke Goju-Ryu
Gaa na 'Chrisley maara kachasị' nkedo
Ebube agbụrụ na ndị uweojii na-eme ihe megidere ndị mmadụ
Na-achọ ka onye
Inye Nzaghachi na Nkọwa nke Polynomials
20 Ndị na-enyocha foto bụ ndị mebiri nke ọma site na Otu Guy Guy
Ịkụ azụ maka Nnukwu Squid
Agha Bosha nke 1868 rue 1869
Mark Twain & Ọnwụ
4 Ihe I Kwesịrị Ịmara Tupu Ịlaọ N'ihie
Echiche nke Economic Rationality
Kedu ihe bụ dike na World Art?
Ndepụta nke Ụlọ Akwụkwọ Ọchịchị Ịntanetị nke Ụmụaka Mississippi, K-12
Top 20 mkpokọta Mnemonics
'Casta Diva' Lyrics, Translation, na History
Omenala Chinese na Atụmatụ Atụmatụ
Mba iri ise kachasị dị ala
Ihe ndị mere maka akụkọ ihe mere eme nke Rom
Agha Ụwa nke Abụọ: Akara Oge Nchịkọta Oge tupu afọ 1914
Mmiri nke Ndụ Mmiri: Baleen
Akụkọ niile, Oge niile, na Spanish
Nyocha banyere ebe a na-agba ọsọ ski
Afọ nke atụrụ - Hitsuji doshi